प्रजनन क्षमता बढाउने ? खानुहोस् यी खानेकुरा | RABHI
प्रजनन क्षमता बढाउने ? खानुहोस् यी खानेकुरा
By kpcat - Friday, October 2, 2015 - No Comments
वैवाहिक जीवनमा प्रजनन क्षमताले निकै महत्व राख्छ । लामो समयसम्म दम्पत्तीबाट कुनै सन्तान उत्पादन हुन सकेन भने जीवन निरश र खल्लो भई यसले दाम्पत्त जीवनमा नै नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । पछिल्लो समयमा जनसंख्याको ठूलै हिस्सा बाझोपनको शिकार भएको पाइन्छ । तसर्थ, स्वस्थ सन्तान उत्पादनका लागि दुबै पुरुष र महिला प्रजननका हिसाबले स्वस्थ हुनुपर्छ । तर, त्यसको लागि उनीहरु उर्वर हुनु आवश्यक छ । यस्तो उर्वरता उनीहरुको खानपिन र जीवन शैलीमा पनि भर पर्छ ।
गोलभेडाः गोलभेडामा लाइकोपेन (गोलभेडालाई रातो बनाउने तत्व) हुन्छ जसको उपभोगले पुरुषको यौन शक्तिलाई सशक्त बनाउछ । पकाएको गोलभेडामा प्राप्त हुने लाइकोपेन र पुरुष उर्वरताबीच धेरै सम्बन्ध रहेका यस अगाडि गरिएका विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । गोलभेडा खाँदा वीर्यको गति, क्षमता र समग्र बनौटमा नै सुधार आउने विभिन्न विज्ञरु बताउछन् ।
ओखरः ओखरमा एक प्रकारको वाक्लो एसिड हुन्छ, जसले पुरुषको वीर्य उत्पदन क्षमतामा अत्यधिक वृद्धि गरिदिन्छ । अमेरिकाको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी एक अध्ययन अनुसार दैनिक २ दशमल ५ औंस अथवा ७५ ग्राम ओखर खाएमा वीर्यको आकार र गतिमा वृद्धि हुन्छ ।
फर्सिको वियाँः फर्सिको वियाँमा वीर्य उत्पादनमा निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जिंक नामको तत्व उच्च हुन्छ,। खनिज र भिटामिनका दृष्टिले पनि फर्सीका बीउ निकै लभदायी मानिन्छ । तसथर्, राम्रो पोषणका लागि फर्सिको दानालाई दालको रुपमा प्रयोग गरी यसको झोल खान सकिन्छ ।
दालः दाल महिला र पुरुष उर्वरता दुबैको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । आफ्नो पोषणबाट न्यून मात्रामा भिटामिन ए र बी प्राप्त गर्ने मानिसको वीर्यको क्रोमोजोम अनियमित हुन्छ । पर्याप्त दालको उपभोगबाट असामान्य र अनियमित क्रोमोजोमको खतराबाट बच्न सकिन्छ । त्यसो त दाल प्रोटिन र फाइबरको ठूलो स्रोत समेत हुन् ।
लसुनः हामीले तरकारी तथा अचारमा दैनिक प्रयोग गर्ने लसुन आफैमा यौनबद्र्धक हो भन्दा कसैलाई अनौठो लाग्न सक्छ । लसुनमा पाइने एलिसन तत्वले शरिरको रक्त प्रवाहलाई सशक्त त बनाउछ नै यौन क्षमतामा पनि वृद्धि गर्छ । लसुनमा पाइने भिटामिन वी सिक्स र सेलेनियम तत्वले शुक्रकिटलाई स्वस्थ बनाउछ ।
पानीः वीर्यको मात्रा र गुणस्तर बढाउने एक मात्र साधारण उपाय भनेको स्वच्छ पानी पिउनु पनि हो । वीर्य आफैमा तरलयुक्त भएकोले पनि जति पानीको मात्रा पिइन्छ त्यति नै स्वच्छ र गतिशिल वीर्य उत्पादन हुन्छ । पानीले शरिरका विषाक्त चिजहरुलाई पखालिदिने र स्वच्छ वीर्य उत्पदन गर्ने हुनाले दैनिक कम्तिमा पाँच लिटर पानी पिउन उपयुक्त मानिन्छ ।
पालुंगोको सागः पालुंगोको सागमा कोषको वृद्धि तथा प्रजनन क्षमताको लागि आवश्यक पर्ने भिटामिन वी पर्याप्त हुने भएकोले यसको उपयोगले पुरुषमा उर्वरता बढाउँछ ।
काला चक्लेटः काला चक्लेटहरु एमिनो एसिडको स्रोत हो । कालो चक्लेट खाने मानिसको वीर्यको मात्रा वृद्धि गर्नुका साथै वीर्यको संख्या र गतिमा पनि वृद्धि भएको विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टि गरिसकेको छ ।
अण्डाः अण्डामा भिटामिन इ प्रर्याप्त हुन्छ । भिटामिन ई ले प्रजनन क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै पुरुषको शुक्रकिटको क्षमतमा वृद्धि गर्नुका साथै समग्र यौन शक्ति नै तीव्र बनाउछ । अण्डाको यही विशेषताका कारण आफ्नो चाहना दबाउनेहरुले यसको प्रयोग गर्दैनन् ।
निलो ऐसेलुः पहाडको वन जंगल तथा पाखा पखेरमा पाइने निलो ऐसेलु यौन उत्तेजक फल बताईन्छ
अन्य फलफुलः नियमित रुपमा स्वच्छ र सन्तुलित फलफुल उपभोग गरेर पनि पुरुषको यौन क्षमता बढाउन सकिन्छ । भिटामिन ए र वी वान युक्त केरा,अनार आप स्ट्रबरीलगायतका मौसमी फलफुलले मानिसलाई स्वस्थ बनाउनका साथै यौन क्षमता पनि तीब्र बनाउँछ ।
from SHYANE http://ift.tt/1PaCIl7
Posted by kpcat at 9:00 PM
No Comment to " प्रजनन क्षमता बढाउने ? खानुहोस् यी खानेकुरा "